Kullan looga hadlay ka hortaga maraakiibta Jiriifka oo lagu qabtay Boosaaso ( Dhegayso) – Radio Daljir
Kullan looga hadlay ka hortaga maraakiibta Jiriifka oo lagu qabtay Boosaaso ( Dhegayso)
Abriil 3, 2013 2:28 b 0
Boosaaso, April 2, Shir ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Khayraadka badda ee Puntland ayna ka qayb galee Agaasimayaal waaxeedka Wasaarada Kaluumaysiga , iyo iskaashatooyinka Kalluumaysatada ee degmooyinka gobolka Bari ayaa maanta lagu soo gaba gabeeyey magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Shirkan oo soconayey mudo 3 maalmood ah ayaa looga hadlay sidii loo joojin lahaa Kalluumaysiga Sharcidaradda ah ee lagu hayo xeebaha Puntland iyadoo laga soo saaray kulanka go’aan loogu digey kalluumaysiga sharci daradda ah.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Kalluumaysiga ee Puntland Md Muuse Geelle Yuusuf oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay inay soo laa laabatay cabashada kasoo yeeraysa kalluumaysatada Puntland islamarkaana Wasaaradda oo kaashanaysa ciidamadda Badda ee Puntland inay ka hortegi doonaan dadka burcadaynaya.
“Guud ahaan Dawladu diyaar bay u tahay inay wax ka qabato dadka iyo gaadiidka sharci darada ah sidii loo qaban lahaa sharcigana loo horkeeni lahaa,’ ayuu yiri Wasiir kuxigeenka wasaarada Kalluumaysiga ee Puntland.
Wuxuu baaq ujeediyey dadka reer Puntland iyo iskaashatooyinka Kallumaystadu inay la shaqeeyaan Dawlada si ay wax uga qabtaan arimahan dhibaatooyinka keenay.
Dhinaca kale kulanka oo ay ka qaybgaleen waxgarad, aqooon yahano, odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay geestooda ku baaqeen in arintani wax laga qabto.
Nabadoon Abshir Dhegacas oo kamid ahaa waxgaradkii kulankani ka hadlay ayaa sheegay in arintani haday sii socoto laga dhaxli doono dhalinta oo Burcad-Badeed ?ku biira.
Wasaaradda Kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Puntland ayaa marar badan ka hadashay dhibaatooyinka lagu hayo khayraadka bada ee Puntland.
Maamulka iyo bulshada Burtinle oo Dayactir kawada qaar kamid ah Wadooyinka magaaladda (Sawiro iyo Dhegaysi)
Maamulka cusub iyo Bulshada Burtinle oo si iskaashi ah ku dayactiraya Wadooyinka Magaalada (Sawiro)